Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Abakhenkethi baseIndiya babekwe ukuba bafunelwe kakhulu
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Iindaba zeLuxury • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Shopping • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Abakhenkethi baseIndiya babekwe ukuba bafunelwe kakhulu.
Ukukhula kuqoqosho lwaseIndiya kuya kuba negalelo ngokuthe ngqo kunyuso lwabantu abakumgangatho ophakathi, okukhokelela ekwandeni kobutyebi kunye nengeniso enokulahlwa kwiminyaka ezayo.
Uphuhliso lokhenketho ludla ngokuphumelela kuqoqosho oluphuhlayo, kwaye ikamva laseIndiya likhangeleka liqaqambile.
Uphuculo lweziseko ezingundoqo zaseIndiya kunye nokuphuhlisa imarike yenqwelo moya enexabiso eliphantsi kuthetha ukuba uhambo oluphuma ngaphandle luyafikeleleka kwaye luyafikeleleka.
Ama-56% amaIndiya athi 'ukufikeleleka' kunye 'nokufikeleleka' zizinto eziphambili zokuqwalaselwa xa kuthengwa iholide.
Abakhenkethi baseIndiya iya kuba ngabahambi abanqwenelekayo, banikwa uqoqosho olukhulayo lwaseIndiya, abantu abancinci kunye nokunyuka komgangatho ophakathi, ngokutsho kwabahlalutyi beshishini lokuhamba. Iingcali ziqaphela ukuba ilizwe kuqikelelwa ukuba liza kufikelela kumanqanaba erekhodi ezizigidi ezingama-29 zohambo oluphumayo ngo-2025-umbono oqaqambileyo othathela ingqalelo ubunzima be-COVID-19.
Ngaphambi kobhubhane, iIndiya yayiyenye yezona zinto zibalulekileyo nezifunwayo emva kweemarike zokhenketho kwihlabathi, kwaye yayiyeyona nto iphambili ekujoliswe kuyo kubadlali abaphambili abanjengo UndwendweloBritani kwaye Ezokhenketho e-Australia.
Ngelixa ingxaki ye-COVID-19 ibeka uxinzelelo olukhulu kuqoqosho lwelizwe nakushishino lokhenketho, Abahambi baseIndiya kulindeleke ukuba balungele ukuhamba kwakhona.
Uqoqosho lwaseIndiya luya kuqhubeka nokwakha kwimpumelelo yalo, emva kokuthomalalisa kokuqala ngo-2020. Uqikelelo lwangoku lubonisa i-GDP yesizwe yaseIndiya iya kufikelela kwi-4 yeebhiliyoni zeedola, i-50% ephezulu kunenqanaba le-2021, ngokwedatha yamva nje.
Uphuhliso lokhenketho ngokwesiqhelo luyaphumelela kuqoqosho olusaphuhlayo, kwaye ikamva laseIndiya likhangeleka liqaqambile - ukuba linokuthintela ukuqhambuka kwe-COVID-19 kunye nokuvalwa okulandelayo. Inika ithuba elibalaseleyo kubathengisi bendawo ekusingwa kuyo, abanokuthi baxhamle kumanani abemi belizwe akhulayo, aquka iGen Z kunye neMillennials (malunga nama-51%). Ezi zizukulwana zityekele ekuhambeni. Ngaphaya koko, ukuphuculwa kweziseko ezingundoqo zaseIndiya kunye nokuphuhlisa imarike yenqwelo moya ebiza ixabiso eliphantsi kuthetha ukuba uhambo oluphuma ngaphandle luyafikeleleka kwaye luyafikeleleka.
Ngokophando lwakutsha nje, ama-56% amaIndiya athi 'ukufikeleleka' kunye 'nokufikeleleka' zizinto eziphambili zokuqwalaselwa xa kuthengwa iholide. Oku kugxininisa ukuba izisombululo zohambo ezilula, ezingabizi kakhulu ziyindlela eya phambili.
Utyalo-mali olwandisiweyo lwaseIndiya kwiinqwelo-moya zohlahlo lwabiwo-mali, kunye nokuphucula iziseko zeenqwelo moya, kuthetha uqhagamshelo olungcono oluvela kwizikhululo zeenqwelomoya zengingqi nezinkulu. Ngoko ke, uhambo lwamazwe ngamazwe luya kuba lula kwaye lungabizi kakhulu Abahambi baseIndiya. Oku kuya kuba yimfuneko kwimpumelelo yaseIndiya kwixesha lasemva kobhubhani.
Sele, uhlahlo lwabiwo-mali lweshishini lenqwelomoya laseIndiya lonyuke kakhulu kule minyaka ilishumi idlulileyo ecaleni koqoqosho lwayo. Ngo-2016, igqithise abathwali benkonzo epheleleyo ngenani lezihlalo zabakhweli ezithengisiweyo, kwaye ibalelwa kwi-51% yazo zonke iitrafikhi zabakhweli baseIndiya ukusukela ngo-2021.